प्रविधि र शैक्षिक परिवर्तन | गृहपृष्ठ
Home Uncategorized प्रविधि र शैक्षिक परिवर्तन
on: June 28, 2018 Uncategorized
आजको शिक्षा ५० वर्षअघिको तुलनामा निकै फरक छ । त्यसको प्रमुख कारण हो, प्रविधि । विगत ५० वर्षको अवधिमा विश्वमा प्राविधिक विकास यति तीव्र भएको छ कि यसले शिक्षालगायत सबै क्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको छ । कम्प्युटर, भिडियो र डीभीडी, डिजिटल क्यामेरा, रिकर्डर जस्ता डिजिटल उपकरणका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । प्रविधिले, पढ्ने, लेख्ने जस्ता विषयमा सहयोग गर्न सक्छ भन्ने यसबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।
पहिला पनि सबै प्रकारका औद्योगिक परिवर्तन प्रविधिले नै ल्याएको थियो । यसले आगामी दिन पनि निरन्तरता पाइ नै रहन्छ । कुनै पनि उद्योगमा प्रविधिले पार्ने प्रभाव थिति बिथोल्ने किसिमको हुन्छ । स्वचालित प्रविधिको व्यावसायिकीकरणले विश्वमा लाखौंको सङ्ख्यामा रोजगारी गुम्ने चिन्ता उब्जिएको विषयलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
उता, अनलाइन सञ्चार प्रविधिको उदयले छापा सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो व्यावसायिक योजनाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।
प्राविधिक परिवर्तनबाट शैक्षिक क्षेत्र पनि अलग छैन । प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले आधारभूत शैक्षिक प्रक्रियामै परिवर्तन ल्याइदिएको छ । प्रविधिले शिक्षामा ल्याएका परिवर्तनलाई तलका केही बुँदामा व्याख्या गर्न सकिन्छ :
१. बढ्दो पहुँच
शिक्षाक्षेत्रमा प्रविधिले ल्याएका परिवर्तनमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो, शिक्षालाई केही दशकअघिको तुलनामा थप सहच पहुँचमा ल्याउनु । आज अनलाइन कोर्सका कारण औपचारिक शिक्षा जो कोहीको पनि सहज पहुँचमा छ । अहिले सबैजसो शिक्षण संस्थाले उच्च शिक्षालाई अनलाइनमा पनि सजिलै हासिल गर्न सकिने बनाएका छन् । यसै कारण पनि आज आफूलाई चाहिएको जुन सुकै कोर्स पनि अनलाइनका माध्यमबाट जो कोहीले प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रविधिले विगतको शिक्षामा रहेको भौगोलिक सीमा तोडेको छ ।
अनलाइन कोर्सको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्घिले आज आफ्नै सिकाइको गतिमा शिक्षा हासिल गर्न सबैलाई सजिलो भएको छ । प्रविधिले जहाँबाट पनि शिक्षा लिन मानिसलाई सहयोग गरेको छ । पहिले जस्तो विद्यालयमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता अब छैन । अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट मानिसले आफ्नो अनुकूल समयमा शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन् । अनलाइनबाटै पढाइका आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुने गर्छ ।
३. शिक्षक–विद्यार्थी अन्तरक्रिया
विगतमा विद्यार्थी र शिक्षकबीच प्रत्यक्ष भेटघाटबाट अन्तरक्रिया हुन्थ्यो । शिक्षकले सोही भेटघाटमा विद्यार्थीको पढाइका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँथे । तर, अहिले भने ईमेल तथा इण्टरनेटमा आधारित अन्य सेवाको माध्यमबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अन्तरक्रिया सम्भव भएको छ । यसका लागि भौतिक उपस्थिति आवश्यक नै पर्दैन । शिक्षक र विद्यार्थीबीचको भौतिक अन्तरक्रियाको महत्त्व बढी नै भए पनि प्रविधिले शिक्षक र विद्यार्थी जुन बेला पनि सम्पर्कमा भइरहन मिल्ने र सक्ने बनाइदिएको छ ।
४. अनलाइन टेष्ट र एसेसमेण्ट
आज प्रविधिका कारण शैक्षिक संस्थाहरू अनलाइनको माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा लिने र उनीहरूको सिकाइको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तो मूल्याङ्कनमा सिक्ने व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित हुन जरुरी पनि छैन । यसले शैक्षिक संस्थाहरूको सिक्ने व्यक्तिमाथिको पहुँच सहज हुनुका साथै समय, पैसा र प्रक्रियामा लाग्ने अन्य स्रोतको पनि बचत गर्छ ।
५. नयाँ कण्टेण्ट
प्रविधिका कारण सिक्ने व्यक्तिका लागि आवश्यक नयाँ कण्टेण्ट सजिलै उपलब्ध हुन थालेको छ । उनीहरू जुनसुकै समयमा जहाँबाट पनि ई–बूक पाउन सक्ने भएका छन् । आज अधिकांश लोकप्रिय पाठ्यक्रमको डिजिटल भर्शन पनि उपलब्ध हुन थालेको छ । निःशुल्क पाइने कुनै कुनै महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा नभए पनि यसले सिकाइ प्रक्रियालाई केही सहज भने पक्कै बनाइदिएको छ ।
६. शिक्षामा विशेष आवश्यकता
हाम्रो समाजमा केही त्यस्ता व्यक्ति पनि छन्, जसलाई विशेष तरीकाको शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिको सिकाइका लागि बेग्लै किसिमको प्रविधिको आवश्यकता पर्छ । डिजिटल सिकाइको प्रक्रियाले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता र क्षमताअनुसार उत्कृष्ट वातावरणमा सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । आजको युगमा शिक्षकले विभिन्न प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यार्थीलाई सिकाउन र पढाउन सक्ने भएका छन् ।
७. सिक्ने काम जीवनभर चलिरहन्छ
पहिले जस्तो विद्यालय र कलेजमा सिकेका विषयवस्तु विद्यालय÷कलेज छाडेपछि बिर्सिने जमाना अब रहेन । ज्ञानले चल्ने आजको युगमा मानिसले जुनसुकै बेला पनि नयाँ नयाँ कौशल सिकिनै रहनुपर्ने आवश्यकता छ । आज सिकाइ हरेकको जीवनको महŒवपूर्ण पक्ष बनेको छ । नयाँ कामको माग पनि बढिरहेको छ, जसको अर्थ काम गर्ने नयाँ नयाँ तरीका पनि सिक्नैपर्ने भएको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कोर्सको उदयले कुनै पनि बेला नयाँ विषयवस्तुबारे सिक्न सक्ने बनाइदिएको छ । त्यसैले, प्रविधिले सिक्ने कामलाई दीर्घकालीन रूपमा चलिरहने गतिविधि बनाइदिएको छ ।
८. मोबाइलबाट सिक्ने
आजको जमानामा मोबाइल नबोक्ने व्यक्ति त शायदै होलान् । मोबाइलको विकाससँगै त्यसमा प्रयोग हुने एप्लिकेशन पनि बढ्दै गएका छन् । शपिङदेखि फी तिर्ने, सिनेमाको टिकट बूक गर्ने जस्ता काम एप्लिकेशनले सहज बनाइदिएको छ । त्यस्तै, मोबाइलबाटै ज्ञान लिने/सिक्ने ट्रेण्ड पनि पछिल्लो समय बढेको छ । केही वर्षयता अमेरिकी बहुराष्ट्रिय सर्च इञ्जिन गूगल इङ्कजस्ता प्राविधिक कम्पनीले मोबाइलको बढ्दो महत्त्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै आएका छन् । इण्टरनेटको पहुँचमा पुग्न मानिसले मोबाइल उपकरणको प्रयोग तीव्र पारिरहेको ती कम्पनीको तर्क छ । त्यसैले, कण्टेण्ट प्रदायकले मोबाइलमा हेर्न मिल्ने खालका कण्टेण्ट दिइरहनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस किसिमका परिवर्तनले शिक्षालाई विभिन्न तरीकाले प्रभावित बनाइरहेको छ । यद्यपि, मोबाइललक्षित शैक्षिक एप्स र कण्टेण्टको विकास गर्ने डेभलपर्सको पनि उदय भइरहेको छ ।
९. प्रशिक्षणलाई रमाइलो बनाउने
शिक्षा प्रदान गर्ने तरीकामा ल्याएको परिवर्तन प्रविधिले शिक्षामा ल्याएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक हो । प्रविधिका कारण आज सिक्ने र सिकाउने काममा एउटै मात्रै दिक्कलाग्दो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्नु पर्दैन । भिडियो, एनिमेशन र अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाको माध्यमबाट सिकाइलाई रमाइलो र थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा कुनै खेलको प्रयोग गर्न पनि सकिने भएको छ । त्यसैले पनि आजको सिक्ने र सिकाउने काम पहिलाको भन्दा रमाइलो र उपयोगी सावित भएको छ ।
१०. लागत कटौती
प्रविधिले शिक्षामाथिको पहुँच हासिल गर्ने क्रममा लाग्न सक्ने खर्च घटाउन पनि सहयोग गरेको छ । आधारभूत प्रक्रिया पूरा गर्न शिक्षा प्रदायकहरूले प्राविधिक एप्लिकेशनको प्रयोग गर्दा शैक्षिक संस्थाहरूले खर्च गर्ने रकममा नाटकीय कटौती गरेको छ । त्यस्तै, प्रविधिका कारण सिक्ने व्यक्तिले पनि शिक्षामाथिको पहुँच हासिल गर्दा लाग्ने खर्च कम भएको छ । सिक्ने र सिकाउने प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउन विभिन्न प्राविधिक एप्लिकेशन प्रयोगको परिणामस्वरूप लागतमा कमी आएको छ । यसले शैक्षिक क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई फाइदा नै पुर्‍याएको छ ।
प्रविधिले शिक्षण सिकाइका विभिन्न तरीका परिवर्तन गरिदिएको छ । शिक्षामाथिको पहुँच थप बढाएर त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनेदेखि सिक्ने प्रक्रियामा शिक्षक र विद्यार्थीबीच हुने अन्तरक्रियामा परिवर्तन ल्याउन प्रविधिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । प्रविधिको प्रयोगले शिक्षामा गहन र सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।